Nezvedu - Weifang Toption Chemical Industry Co., Ltd.
Weifang Toption Chemical Indasitiri Co, Ltd.
Isu tinorara munzvimbo yeBinhai yekusimudzira hupfumi, inova hombe makemikari ekugadzira emvura muChina, senge gungwa munyu, Soda Ash, Bromine. Zvakanakira zviwanikwa zvemuno zvinosimbisa mhando yezvigadzirwa zvedu uye zvinoderedza mutengo wekugadzira. Zvekuti zvigadzirwa zvedu zvine simba rakakwikwidza rakanyanya munyika. Parizvino, kugona kwegore negore kweSdoium Metabisulphite kwasvika matani 150000, nehutsanana hwakanyanya 97% min. Calcium Chloride ine 200000 yekugadzira yegore, isina tsvina shoma uye mhinduro yakajeka. Se ISO9001, KOSHER uye HALAL yakatenderwa bhizinesi, zvigadzirwa zvedu zvinogona kushandiswa muindasitiri yezvikafu zvakachengeteka.
Toptionchem inozivikanwawo mukuchera makemikari, akadai seCalcium Bromide, Sodium Bromide, Gel Breaker, nezvimwe. Pakati pezvigadzirwa izvi, Encapsulated Gel Breaker ine pagore inokwana 4000MT ine patent tekinoroji. Inoshandiswa zvakanyanya mu petroleum hydraulic fracturing munda kudzikisa viscosity yeGuar Gum. Yakanaka yezvirwere bvunzo michina, yakadai saGrace M5600, inovimbisa yakanaka yemhando kutonga.Can gadzirisa Gel Inopwanya zvinoenderana nevatengi 'kudiwa pane tembiricha uye kutyora nguva.
Toptionchem yakazvipira kuchengetedza enviromental, shingairira kusimudzira kutenderera uye hupfumi hwesimba nyowani, kuti uwane kusimudzira kusimukira. Shandisa kupisa simba kwakaburitsa panguva yekugadzira Sodium Metabisulphite kugadzira Calcium Chloride neMagnesium Chloride, tora iyo yakaburitswa Carbon Dioxide kuti ibudise Sodium Bicarbonate.
Yakapona nehunhu uye yakavandudzwa neCredit ", kutsvaga iro bhizinesi chinangwa chezvakanakisa zvigadzirwa, iyo yepamusoro mutengo kuita, seyakanakisa sevhisi, uye kugutsikana kwakanyanya.
Mushure memakore gumi nemashanu ekuvandudza, kambani yakawana iyo ISO: 9001 Quality System Chitupa, Quality Management System Chitupa. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zvedu zvakawana zvitupa zveKosher neHalal kuzadzikisa zvido zvevatengi vekunze kwenyika vane zvitendero zvakasiyana. Yakazvipira mukuvandudza pfungwa yehupfumi hwezvakatipoteredza, maitiro ekugadzira haana kusvibiswa, akaonekwa nehurumende yedu yemuno.
Zvigadzirwa zvinotumirwa kuSoutheast Asia, Europe neAmerica, Central neSouth America, Africa nyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu.Mhando yezvigadzirwa zvedu yakagamuchirwa zvakanaka nevatengi vekunze.
Hydrosulfite, Karusiyamu Bromide Solution, Karusiyamu Bromide Anhydrous, Karusiyamu Bromide Liquid, Natrium Hydrosulfite, Hydrosulfite De Sodium,